Qhubeka kabusha izithombe zekhofi ezithengiswayo China Manufacturer
Incazelo:I-Coffee Ripple Maker,Umshini wekhofi ophethe i-Frother,Izithombe zekhofi ezithengiswayo
Home > Imikhiqizo > Iphrinta yokudla > I-Macaron Printer > Qhubeka kabusha izithombe zekhofi ezithengiswayo
Umshini wedijithali we-digital latte yobuciko unezici eziningi ezinamandla. Kungaphrinta ubuso bomakhasimende noma amagama abafuna ukuwaveza phezu kwekhofi / isinkwa / amabhisikidi. Ukushicilela imininingwane ebusweni kwikhofi kuyindlela emisha yokwenza ubuciko be-latte, kusho ukuthi akudingeki usebenzise isikhathi esiningi sokufunda nokusebenzisa ubuciko be-latte, udinga ukuthatha isithombe bese iphrinta izoqeda ukuphumula.
I-coffee maker maker kufanelekile ngekhekhe, isinkwa, ibhisikidi, ama-macaroni ... izinhlobo zokudla. Ngaphandle kwalokho, futhi kungasebenza ngendwangu, igobolondo lefoni, ikhadi le-PVC, i-DVD, ibhodlela, isikhumba, insimbi, ipeni nokunye. Izindleko ezilahlekile futhi zisebenza kahle.
ikhompiyutha yomhlaba wekhofi isetshenziselwa ukuphrinta izithombe ekudleni.Izinemibala engu-6 engayinyathelisa izithombe ezimibalabala nezikhanyayo.Umphumela wokuphrinta ucacile.Umshini ungashintsha umsebenzi wezincwadi. umshini wekhofi onama-frother
Izithombe zekhofi ezithengiswayo uhlobo olusha lwephrinta ye-inkjet eqondile yokuphrinta ngokuzikhandla, isebenza njengeprinta yezinkinobho zendabuko, yenza ukuphrinta ngokunyathelisa ngokuqondile kwe-inkjet, kodwa ngenxa yokuphakamisa i-flatbed, iphinde iphrinta cishe kuzo zonke izinhlobo zezinto ngaphandle amaphepha, njengamaqebelengwane, izinkuni, izinsimbi, iplastiki, isikhumba, nezinye izembatho, indwangu, njll.
Izithombe zekhofi ze- Semi-Automatic ze- Refinecolor ezithengiswayo
ikhwalithi yekhwalithi ephezulu yesitayela Xhumana Nanje
I-Coffee Ripple Maker Umshini wekhofi ophethe i-Frother Izithombe zekhofi ezithengiswayo I-Coffee Ripple Maker Printer Coffee Ripple Maker Inani I-Coffee Latte Maker I-3d Coffee Maker Coffee Ripple Singapore